8 फ्रान्सको लागि यात्रा गर्नु पर्ने चीजहरू – Vocre
फ्रान्स सकियो 89 प्रत्येक वर्ष लाखौं पर्यटक देश भ्रमण गर्छन्, मा पुग्न एक लक्ष्य संग 100 अर्को केही बर्षमा लाख पर्यटक. धेरै धेरै राम्रा दृश्यहरूका साथ, लुभ्रेबाट एफिल टावर सम्म, फ्रान्स भ्रमण गर्ने सबैको लागि त्यहाँ केही छ. जबकि गर्न को लागी धेरै योजना छ, त्यहाँ केहि आईटमहरू छन् जुन तपाईं आफ्नो फ्रान्स ट्राभल गाईडसँगै ल्याउन चाहानुहुन्छ.
1. पासपोर्ट र फोटो आईडी
अवश्य, फ्रान्स भ्रमण गर्न तपाईलाई राहदानी वा भिसा चाहिन्छ. या त कागजातको लागि एकदम चाँडै नै आवेदन दिन निश्चित गर्नुहोस् किनभने उनीहरूले हप्ताहरू वा महिना लिन सक्दछन्. तपाईं एक फोटो आईडी साथ ल्याउन चाहानुहुन्छ.
आईडी mm 45 मिमी x 35 35 मिमी को हुनु पर्छ.
ID ले तपाईंलाई आफैलाई प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ Navigo Pass यसले तपाईंलाई सस्तोमा यात्रा गर्न अनुमति दिन्छ. यो एक पास को लागी € costs लागत, र तपाई हप्ता वा महिना को लागी प्याकेजहरु किन्न सक्नुहुन्छ. जब तपाईंसँग पास छ, यसले तपाईंलाई तपाईंको यात्रामा पैसा बचत गर्न अनुमति दिन्छ. तर तपाईंलाई पासमा राख्न आईडी पनि चाहिन्छ, त्यसैले यो तपाईं संग ल्याउन को लागी निश्चित गर्नुहोस्.
2. नगद र डेबिट कार्ड
नगद, डेबिट वा क्रेडिट कार्डहरू फ्रान्समा तपाईंको पैसामा पहुँच गर्न सजिलो तरीका हुन्. जब तपाईं ट्रेनमा जानुहुन्छ वा ट्याक्सी चढाउनु पर्दछ त्यस समयका लागि नगद राम्रो हुन्छ. यदि तपाईंले आफ्नो पैसा गुमाउनु भयो भने, यो ट्रेन मा चोरी छ (असामान्य छैन) वा तपाईं पैसा समाप्त भयो, एटीएम पत्ता लगाउनुहोस्.
एटीएमहरू सम्पूर्ण फ्रान्स मा छन्, र वास्तविक बैंक एटीएमहरूले प्राय: शुल्क लिदैन.
एटीएम फेला पार्न "वितरणकर्ता अटोमेटीक डे बिलेट" भन्ने संकेतहरूका लागि खोजी गर्नुहोस्. संदिग्ध गतिविधिको कारण तपाईंको फिर्ताको जोखिमलाई कम गर्न तपाईंले आफ्नो बैंकलाई तपाईंको यात्रामा समय अघि सचेत गराउन चाहानुहुन्छ।.
3. युनिभर्सल एडाप्टर
फ्रान्समा मुख्य वा इलेक्ट्रिकल आउटलेट तपाईंको देशको इलेक्ट्रोनिक आईटमहरू भन्दा भिन्न हुन सक्छ. एक यूरोपीयन एडेप्टर तपाईंको उत्तम शर्त हुनेछ र तपाईं सजिलै फ्रान्स प्लगमा रूपान्तरण गर्न अनुमति दिनेछ.
तपाईंलाई पावर कन्भर्टरको पनि आवश्यक्ता पर्दछ जसले यो सुनिश्चित गर्दछ कि तपाईंले आफ्नो इलेक्ट्रोनिक्स फ्राई गर्नुहुन्न जब तपाईं तिनीहरूलाई प्लग इन गर्नुहुन्छ.
4. Vocre अनुवादक + मोबाइल अनुप्रयोग
Vocre गैर-फ्रान्सेली स्पिकरहरूलाई स्थानीयसँग कुराकानी गर्न मद्दत पुर्‍याउने मोबाइल अनुप्रयोग हो. यदि तपाईंलाई प्रश्नहरू सोध्नु पर्छ वा खाना आदेश दिनुहोस्, भोकर आवाज र पाठ अनुवादको साथ भाषा अवरोधबाट फुट्छ.
अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहोस् र अनलक गर्नुहोस् 59 एकै पल्टमा भाषाहरू.
व्यक्ति आवाज फिर्ता कुराकानी गर्न पाठ अनुवाद प्रयोग गर्दा अरूले के भनिरहेका छन् भन्ने कुरा बुझ्न तपाई आवाज अनुवाद प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ. यदि तपाईं उच्च स्तरमा फ्रेन्च भाषा जान्नुहुन्न, यो अनुप्रयोग हुनै पर्छ.
5. पावर बैंक
संभावना छ, तपाईं फ्रान्स वरिपरि यात्रा गर्दै गर्दा तपाईं मा एक स्मार्ट उपकरण छ. सबैजना आफ्नो स्मार्टफोन संग चित्रहरु स्न्याप गर्दै छन्. समस्या यो हो कि तपाईको फोनलाई अन्ततः चार्ज गर्न आवश्यक पर्दछ.
यदि तपाईं धेरै धेरै ड्राइभ गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईं सधैं कारमा फोन चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ.
अन्यथा, तपाईं आफ्नो यात्रा को लागी एक पावर बैंक ल्याउन चाहानुहुन्छ. पावर बैंकले तपाईंलाई आफ्नो फोन चार्ज गर्न अनुमति दिन्छ, वा अन्य उपकरण, जाँदाजाँदै.
6. घाँटी वालेट
धेरै पर्यटकहरू सुन्दर फ्रान्सेली गाउँहरूमा जान पेरिसको हतपती र भग्न कोसिस गर्छन्. जबकि त्यहाँ सुरक्षा र सुरक्षा को भावना छ, सब भन्दा ठूलो गल्ती मध्ये एक तपाईं यसलाई सादा दृष्टिमा बहुमूल्य चीजहरू छोड्न सक्नुहुन्छ.
घाँटी वालेट सजीलै लुकाउन सकिन्छ र तपाईंलाई तपाईंको सबै महत्त्वपूर्ण कागजातहरू तपाईं आफैंमा राख्नको लागि चोरी गर्न जोखिममा राख्नुहुन्छ.
तिमी सक्छौ भने, Aix एन प्रोभेन्समा लक्षित हुनबाट जोगिनको लागि होटेलमा तपाईंको सामान छोड्नुहोस्.
7. फ्रान्स यात्रा गाइड
त्यहाँ छ धेरै फ्रान्सको यात्रा गर्दा हेर्नका लागि. केहि उत्तम पर्यटन गन्तव्यहरू र लुकेका रत्नहरू उपेक्षित गर्न सजिलो छ जुन स्थानीयहरूले केवल जानेका छन्. तपाईं अनलाइन अनुसन्धानमा भर पर्न सक्नुहुन्छ, तर फ्रान्स यात्रा मार्गनिर्देशन प्राय: उत्तम विकल्प हुन्छ.
सबैभन्दा धेरै लोकप्रिय गाइडहरू हुन्:
रिक स्टीव्स 'फ्रान्स सबै चीजको लागी एक गाइड हुनुपर्दछ, के आशा गर्न बाट जब बासनामा र गन्तव्यहरूमा भ्रमण को लागी.
एक्लो प्लेनेट फ्रान्स ट्राभल गाइड पुस्तक आकर्षणको लामो सूचीको साथ छवि र ऐतिहासिक जानकारी प्रदान गर्दछ, रेस्टुरेन्ट र अन्य स्थानहरू.
Frommer's फ्रान्स ट्राभल गाइडबुक महान छ किनकि यसले जानको लागि स्थानहरू सूचीबद्ध गर्दछ र बेवास्ता गर्नुहोस्.
8. यात्रा बीमा
यात्रा तपाईंको जीवनको एक उत्तम पलहरू हुनसक्दछ, तर जब तपाईं योजना समय को एक धेरै खर्च गर्न सक्नुहुन्छ, चीजहरू जहिले पनि योजना गरिएको जस्तो हुँदैन. यात्रा बीमा तपाईको सपनाको छुट्टी कहिलै बिग्रने छैन भनेर निश्चित गर्नका लागि आवाश्यक वस्तुहरू मध्ये एक हो.
बीमा चिकित्सा खर्च को कभर हुनेछ, उडान रद्द र हराएको वा चोरी भएको वस्तुहरू. जब अप्रत्याशित हुन्छ, तपाईं खुशी हुनुहुनेछ कि तपाईंले यात्रा बीमाको लागि भुक्तान गर्नुभयो.
यदि तपाईंले फ्रान्स भ्रमण गरिरहनु भएको छ भने, यी आठ वस्तुहरू तपाइँको यात्रा पनि बनाउन मद्दत गर्दछ राम्रो.